musha nyika dzakabatana Vatyairi veNASCAR Joey Logano Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Joey Logano Biography inotaura chokwadi nezvehudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, mhuri, Vabereki (Tom naDeborah Logano), Mukadzi (Brittany Baca), uye Mwana (Hudson Joseph Logano).
Moreso Hupenyu hweMujaho, Networth uye Mararamiro. Joey Logano ane vanin'ina here? Ngatibatei.
Muchidimbu, tinopa mufananidzo wakazara wehupenyu Memoir yaJoey Logano, shasha yeNASCAR. Isu tinotanga Bio yake kubva pamazuva ake ekutanga kusvika mukurumbira wake mukumhanya.
Kuti ukudze chishuwo chako muJoey Logano's Biography, isu tinopa iyo mafoto gallery pazasi. Chokwadi, inopfupisa Hupenyu hwepakutanga uye Kusimuka kweauto sports racer.
Hupenyu Hupenyu hwaJoey Logano mudiki kune NASCAR Champion.
Tinoziva mutambi wemibayiro yakawanda kuzita rake. Nekudaro, kunyangwe nerukudzo, vashoma vateveri vemitambo yemotokari vane ruzivo rweJoey Logano's Biography. Saka, pasina kutambisa nguva, ngatitangei.
Joey Logano Childhood Nyaya:
Kutanga, ane zita rakazara Joseph Thomas Logano, ane zita rake remadunhurirwa se 'Sliced ​​Bread'.
Pana 24th yaMay, 1990, Joey Logano akaberekwa kuna baba vake, Thomas Logano naamai vake, Deborah Logano muConnecticut, United States.
Pamusoro pezvo, mujaho wechidiki ndiye mukuru pavana vaviri pakati paDeborah naThomas Logano. Vaviri vanoyevedza vari pamufananidzo uri pazasi.
Sangana nevabereki vaJoey Logano, Deborah naThomas Logano.
Joey akakurira kuMiddletown nemudiki wake Danielle Logano. Semwana, akatanga mujaho pazera 6, kungofanana nemumwe shasha Kevin Harvick. 'Chingwa chakachekwa' mujaho wekutanga waiva Ko-gart muna 1996 muConnecticut.
Mufananidzo Wehudiki waJoey Logano Uye Baba vake, mune yavo yekutanga Ko-gart.
Rimwe gore gare gare, muna 1997, mudiki akahwina mukombe wake wekutanga weGrand National mumotokari yemasheya. Pamusoro pezvo, mujaho wechidiki akawedzera mamwe mikombe, achihwina matatu eNew England Championship.
Little Joey seMutyairi weGore Achimira Nemikombe yake.
Ukuwo, mujaho hausiriwo wega mutambo waitambwa nemwana mudiki. Kutaura muchidimbu, aiva nezviitiko zvakanaka paaiva mwana.
Joey Logano Mhuri Background:
Mutambi akazvarwa aine chipunu chesirivheri, sezvo Thomas Logano aive muridzi webhizinesi.
Indasitiri yemarara yakabudirira zvikuru kuna baba vaJoey Logano. Mari kubva mubhizinesi yaive yakakwana kutsigira zviroto zvevana vake (Danielle naJoey).
Nepo mudzimai waThomas, Deborah Logano, aive skater. Zvese izvi pamwechete zvakaita kuti mhuri yaJoey igadzikane mune zvemari, kusiyana nemamiriro ezvinhu Kevin Harvick's mhuri.
Pasinei neropafadzo yeblue-collar, mujaho aikura achiri kuda kushanda nesimba.
Joey Logano Mhuri Mavambo:
Ngatitarisei kudzinza remhuri yemukuru weNASCAR, inova inonakidza kuverenga. Kutanga, baba vaJoey Logano (Thomas) muItaly, nepo amai vake (Deborah) vari vekuAmerica.
Nekuzvarwa, iye mugari weNyika yeRusununguko (America), chizvarwa cheMiddletown. Mepu iri pazasi inotsanangura midzi yemumhanyi. Muchidimbu, mujaho ane marudzi maviri, aine ropa rakasanganiswa renyika mbiri.
Tarisa Mhuri Midzi yaJoey Logano, Mutambi weHafu weItaly neAmerican.
Joey Logano Dzidzo:
Paakanga ari wezera rechikoro, vabereki vaJoey (Deborah naThomas) vakamunyoresa muSt. John's Elementary School, Middletown. Sezvineiwo, chikoro chakavharwa pashure pemwedzi yakati kuti.
Chikoro cheSt. John's Elementary, Kwaidzidzira Joey Logano Pre-Chikoro.
Nekudaro, amai vaJoey vakazvitakura kudzidzisa uye kudzidzira kumba mwanakomana wavo. Mushure mokunge apedza kudzidza, mujaho wepamusoro-soro akapinda munyika yemijaho.
Joey Logano Motor Racing Nyaya - Kubva paMazuva Ekutanga
Sezvambotaurwa, Joey akanga atotanga basa rake achiri mudiki. Saka apedza kudzidza, akabatana neNascar Truck Series kuNew Speedway. Mumujaho iwoyo, akapedza aine nzvimbo yekutanga neyechipiri pamwe chete.
Paakanga ava nemakore 16, mutyairi weNascar zvino akakwikwidza muGrand National Division series.
Pamusoro pezvo, Iyo Rising Star yakahwina iyo Toyota All-Star Showdown uye iyo Carolina 500 mukombe muna 2007.
Sangana neToyota All-Star Showdown Winner muna 2007, tichifarira Kukunda kwake.
Mushure mezvo, muna 2008, rookie akave muhwina mudiki kuhwina mujaho weNASCAR akateedzana. Joey Logano akarovawo mumwe mujaho Kyle Busch kuhwina Dollar General 300 mugore ra2009.
Chingwa Chakachekwa Chichipembera Nevashandi Vake, Kuhwina kwake muDollar General Race Mushure mekurova Kyle Busch.
Muchidimbu, mujaho mutsva uyu akange aita zvakati wandei paudiki hwake. "Chingwa chakachekwa" ndiye chete mutyairi akahwina mijaho mina paDover series. Kupfuurirazve, ndiye mutyairi wechi26 kuhwina matatu ekutanga Xfinity Series.
Joey Logano Biography - Nyaya yekubudirira:
Iyo 'Sliced ​​Chingwa' yakave mujaho weNASCAR akazvarwa muma1990s kuhwina Mutambo weMutambo weChiitiko. Moreso, mudiki kuhwina Sprint Cup Series pa19yrs. Mumhanyi akawedzera mamwe mabasa nekuhwina Duck Commander 500.
Kunyanya, kukunda uku kwakakodzera kupembererwa nekuda kwezviitiko zvakaitenderedza.
Joey Logano akahwina Duck 500 zvisinei nekunaya kwemvura munhangemutange, mukupedzisira, mamiriro ekunze haagone kumumisa. Mufaro wakachena muchiso chake pasi apa unotsanangura kuti anonzwa sei.
Iko Kufara Kwakachena kweMutyairi sezvaanosimudza Pfuti dzake Kupemberera Dhadha 500 Win.
Mukombe weDaytona ndiwo unodiwa nemujaho wese wenyeredzi kuhwina. Nekudaro, mukwikwidzi wemitambo ndiye mutyairi mudiki kutanga mujaho weDaytona. Pakupedzisira, akabata zita racho sechipiri junior Daytona 500 Winner muna 2009.
Sangana nemuhwina wechipiri weDaytona 500.
Mashoko okuti, “mushandi ane unyanzvi, achagara pamberi pamadzimambo,” akazadzika kumutyairi uyu ane unyanzvi. Muchidimbu, President Donald Trump akakudza Joey Logano pa white house nemukombe wake weNascar wa2018. Mubairo uyu waive sundidzira kune shasha kuti iite zvakawanda.
Mutungamiri Donald Trump Kunze kweMujaho nemakombe ake eNASCAR, Kunyemwerera Kusina Kumira.
Mukupedzisa, panguva yekunyora Joey Logano's Bio, iye zita remhuri munyika yeAutosports.
Kubva kumukomana mudiki akakurudzirwa nababa vake (Thomas Logano) kuenda kuNASCAR Champion. Zvimwe zvacho inhoroondo, vanodaro.
Joey Logano Akaroora here? -Kubvunza nezve Mukadzi wake, Vana
Upenyu hwomujaho wemotokari hunogona kutatarika, zvichiita kuti munhu apotsane nezvimwe zvikamu. Vamwe vatambi vanoshuvira kuramba vasina kuroora uye kuisa pfungwa pamabasa avo, nepo vamwe vanonamatira kune imwe wag kuti vafare. Kuti izvi zviitike, mutyairi weNascar anosarudza Brittany Baca.
Sangana nemukadzi waJoey Logano, Brittany Baca.
Brittany Logano akaberekwa naRay Abraham Baca naMai Michelle Baca. Ndiye alumnus waDavid W. Butler High chikoro uye akapedza kudzidza zvePsychology kubva kuUNCC. Unotevera mufananidzo wemhuri yaBrittany, vabereki vake, uye mukoma, kyle.
Tarisai Mhuri yaBrittany Baca.
Brittany Baca naJoey Logano vakasangana sei:
Vaviri ava vaive vana sweethearts. Asi, mushure memakore akati kuti vaparadzana, Joey naBrittany vakasangana munhandare yehanzvadzi yake (Danielle Logano) skate. Uye kubva ipapo vakatanga hukama hunofadza.
Chikumbiro uye Muchato:
Mukomana wemudiwa Joey akakurudzira ngoro yake Baca nemotokari yemabhanan'ana munaNovember 2014.
Uye mwedzi wakatevera, muna Zvita, vakave Mr naMai Logano muAsheville, North Carolina. Ona kuti vanotaridzika sei pazasi.
Kubva kuna Joey's Proposal kuna Mr naMai Logano.
Vana vaJoey Logano:
Makore matanhatu mushure memuchato wavo, vaviri veNASCAR (Joey naBrittany) vane vana vaviri:
Hudson Joseph Logano, mwanakomana wavo wekutanga, akaberekwa muna Ndira 2018.
Ndichiri mwana wechipiri, Jameson Jett Logano, muna Chivabvu 2020. Inotevera mufananidzo wevana vaJoey Logano.
Jameson Jett Logano naHudson Joseph Logano, Vana veNASCAR Couple Joey naBrittany Logano.
Zvakanaka, zvinoita sekuti Vabereki (Baca naJoey) vanotarisira kuwedzera ukuru hwemhuri. Mune a bumbiro rulula, murume nomukadzi vakarojera mwana wechitatu, uye anogona kunge ari musikana!!
Saka kunze, kuhwina nyika yeNASCAR makwikwi uye kumhanya mijaho. Chii chinoitwa nemuhwina weDaytona 500 2009? Chekutanga, 'chingwa chakachekwa' zodiac chiratidzo ndiGemini. " Nokudaro, chido chake ndechekutsvaga nzira dzekubatsira vamwe.
Rubatsiro urwu runopa zvinotevera kune nzanga:
J. L Vana Vashandi:
Vamwe Vagamuchire veJL Crew mune yavo yezuva rimwe Crew Nhengo naJoey Logano.
Ichi chirongwa chinobvumira vechidiki kuti vabatane neNASCAR Winner mune imwe yemijaho yake. Kusanganisira certs dzakagadzirwa, kusangana kwakavanzika uye kukwazisa, uye kushanda sevashandi vezuva rimwe chete. Vachiri kuwana masutu anoenderana naDriver.
Nhamburiko Yekubatsira Yakakosha:
Iyo JL Foundation inopa zvekushandisa kune vanhu vanopinda mukuomerwa gore rega rega. Kunyanya vana vekuchikoro, vechidiki vekurera, uye vechidiki.
Grants uye Mari:
Uyezve, chirongwa ichi chakanangana nemasangano anotsigira vechidiki vechidiki vari muvanhu vanotambura. Iyo JL Foundation inodada kubatsira vanogamuchira nemukana wechipiri.
Joey Logano Mararamiro Chokwadi:
Iyo motorsports yekuAmerica inorarama hupenyu huri nyore. Asi, hazvimutadzisi kuwana zvinhu zvoumbozha zvishoma. Uye chimwe chazvo kuda kwake mota.
Joey Logano's Ford Mustang inodhura 19 Mamirioni uye pamusoro. Haisiyirwe kunze iFord Model T limousine. Zvamazvirokwazvo chiono chokuona, sezvatinogona kuona pasi apa.
Tarisai, Dzinodiwa Mota neake Signatory Nhamba 22.
Joey Logano NetWrth:
Mutyairi wemasheya wekuAmerica akazviitira zvakanaka. Muhwina wemukombe makumi maviri nemanomwe ane mihoro yakawanda muzita rake. Kujoinha mujaho uchiri mudiki kunouya nezvakawanda zvakanaka, sevatsigiri uye kutsigira.
Muna 2019, "chingwa chechidimbu" chakawana madhora gumi nerimwe, zvichimuita mutyairi weNASCAR wechishanu akabhadhara. Asi, makore maviri gare gare, data yakachinja. Zvinoenderana ne11 stats, mutyairi weRace ane mambure anokosha emadhora makumi mana nemana.
Joey Logano Mhuri:
Tarisai Nhengo Dzimba dzaJoey Logano (Thomas, Deborah, Danielle) Vaine Kubuda Kwemhuri.
Zvimwe zvinhu zvinogona kuchinja muhupenyu, asi isu tinotanga uye tinopedzisira nemhuri dzedu. Saizvozvo, mhuri yaJoey Logano yaive kambasi yakamutungamira mukubudirira mu Autosports. Nekudaro, hatingambovabvisa kubva muBiography yake.
Nezve Baba vaJoey Logano:
Thomas Logano aive mutengesi webhizinesi muindasitiri yemarara iyo yakabudirira. Baba vane rudo vaive neshungu dzekubatsira vana vavo muzviroto zvavo. Baba vaJoey Logano vakambogadzira chitupa chekuzvarwa kwemwanakomana wavo mumakwikwi emujaho.
Sangana naBaba Vanoda veNASCAR Mutyairi Joey, Thomas Logano, Pamwe chete neMuzukuru wake.
Zvekare, akapinda muhondo pakati paJoey nemumwe mujaho Champion Kevin Harvick. Pakupedzisira, rudo rwaThomas kumwanakomana wake runomuita kuti aende kune chero hurefu kuti adzivirire NASCAR Champion.
Nezve Amai vaJoey Logano:
Deborah Logano inyanzvi skater, uye mwanasikana wake (Danielle) akatora mushure memitambo yakafanana. Amai vaJoey mukadzi akanyarara anodada nekuchengeta imba yake. Kutevera mufananidzo waamai vanodada nemwanakomana wavo sezvaanomupemberera.
Joey Logano Kupemberera Amai vake (Deborah) paZuva raamai.
Harisi basa riri nyore kutarisira imba uye kuva nebasa renguva yakazara.
Saka kuti Deborah aite izvi zvinoratidza kusimba kwakaita mukadzi wababa vaJoey Logano. Nguva yese, mutyairi wecoca-cola haambotadzi kutenda amai vake.
Zvimwe Nezve Hanzvadzi yaJoey Logano:
Danielle Logano ndiye ega mukoma wemuhwina we2019 Daytona 500. Mukoma mukuru waJoey inyanzvi ye ice skater uyo anowedzerawo cheerleading pabasa rake.
Mukuwedzera, akaroorwa naBrendan Logan, uye pamwe chete vari mumufananidzo.
Tarisai Hanzvadzi Yakanaka yaJoey Logano Pamwe chete neMurume wake, Brendan.
Hatikwanise kunyora nyaya dzavo dzese dzehudiki nezvavo. Chokwadi, hapana chisungo chakakosha kupfuura icho chehama nehanzvadzi, uye Joey Logano anogara achitsigira Danielle. Pakupedzisira, kushamwaridzana kwake naye kunotaura zvakawanda.
Nezve Hama dzaJoey Logano:
Sekuru Sal vaive mutambi webaseball akatanhamara. Akambove nhengo yechikwata kune iyo panguva iyoyo-New York Giants pachibvumirano mushure mekumupa muyedzo. Zvinosuruvarisa, isu hatina rumwe ruzivo nezve muzukuru wake.
Joey Logano's Untold Chokwadi:
Isu tinoziva nezvehudiki hwemuItaly, mukadzi wake nevana vake. Asi, kuchine chokwadi chisinga taurike nezve mutyairi weNASCAR, watichakurukura muchikamu chino:
Chokwadi #1- Kurwa naDenny Hamlin:
Wanga uchiziva here kuti mutyairi weRace aive muchikwata chimwe chete aine matatu-nguva Daytona 500 akahwina Denny hamlin? Asi, zvinoshamisa kuti vakazorwa.
Pasinei nekudziviswa nevakuru, hondo yacho yakanga yakakura zvokuti hapana aida kuipedza. Vhidhiyo iri pazasi inotsanangura kuti yakadzika sei.
Chokwadi #2- Hockey Ice Sport:
Mujaho wemota hausi iwo wega mutambo wakaitwa naJoey Logano pakukura. Sezvambotaurwa, hanzvadzi yemutyairi weNASCAR naamai skaters, asi akabatana neIce Hockey.
Zvakanaka, Joey angave akanaka muhoki. Rudo rwemujaho rwakakosha kudarika chero mutambo. Zvisinei, mumufananidzo uri pasi apa ndiye goaltender munguva yake.
Sangana neIce Hockey Goal Tender, vese vachinyemwerera muJersey rake.
Chokwadi #3- Chitendero chaJoey Logano:
Muupenyu hwomunhu, kuremekedza kwake chimwe chinhu kunoratidzwa nezviito zvavo. Uye uyu mujaho wemasheya akabudirira weAmerica anogara achiratidza kutenda kwake kwakadzama muna Mwari.
Joey Logano muKristu uye anopinda Elevation Church pamwe chete nemhuri yake. Vhidhiyo iri pasi apa inorondedzera zvakaitika kwaari naMwari uye kuti zvakachinja sei hupenyu hwake kuti huve hwakanaka.
Gypsy Rose Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chokwadi #4- Chirwere:
Waona here kuti mutambi wemujaho ane mhanza? Zvakanaka, hazvisi zvisikwa, asi nokuti Joey Logano ane chirwere che autoimmune iyo inorwisa bvudzi.
Neraki kuItari, hutano hwake hwepanyama hausi panjodzi. Alopecia Areata, zita rechirwere, rakajairika kune vagari vemuUnited States. Izvo zvinongoonekwa chete mukurasikirwa kwebvudzi.
Tafura inopa tsananguro yakajeka yechimiro chaJoey Logano.
Zita rizere: Joseph Thomas Logano
Zita rekudanwa: The Sliced ​​Bread
Zuva rekuzvarwa: 24th yaMay, 1990
Age: Makore makumi maviri nemashanu mwedzi
Nzvimbo yekuzvarirwa: Connecticut, nyika dzakabatana
Baba: Thomas Logano
Amai: Deborah Logano
Hanzvadzi sikana: Dannielle Logano
Mumwe: Brittany Baca Logano
Vana: Hudson Joseph Logano
Net Worth: $ Miriyoni 44
Kureba muMeters: 1.85 M
Kureba mu Tsoka: 6 '1
Basa: NASCAR Mujaho Mutyairi
Iyo Biography yeiyi American NASCAR mutyairi inyaya yerudo rwakadii rwababa vaJoey Logano (Thomas) kumwanakomana wavo. Kuwanda kwaakaita kumwana wake kuti aone kuti abudirira.
Mukuwedzera, kushanda nesimba nguva dzose ndiyo nheyo kune ani zvake muupenyu. Zvinhu zvinogona kunge zvaive nyore pakutanga kuna Joey mudiki. Chokwadi, ndiko kuedza kwaakaita mumujaho ndiko kwakaita kuti arambe ari pamusoro.
Kupfupisa, tinotenda kuverenga kwako chinyorwa pane yedu Autosports mbiri. Ndokumbira usvike kwatiri kuburikidza nepeji yedu yekusangana kana iwe ukaona chimwe chinhu chisina kunaka neJoey Logano's Bio.
Childhood Biography Diary - yeNASCAR Vatyairi
Dai 16, 2022